မြစ်ကြီးနားမြို့၌ ကျင်းပမည့် (၇၁) နှစ်မြောက် ကချင်ပြည်နယ်နေ့ကို Jhinghpaw Mungdaw Nhtio အမည်ဖြင့် ပြောင်းလ? - Yangon Media Group
မြစ်ကြီးနားမြို့၌ ကျင်းပမည့် (၇၁) နှစ်မြောက် ကချင်ပြည်နယ်နေ့ကို Jhinghpaw Mungdaw Nhtio အမည်ဖြင့် ပြောင်းလ?
မြစ်ကြီးနား၊ ဇန်နဝါရီ ၈
ကချင် ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့၌ ကျင်းပရန် စီစဉ်ထားသည့် (၇၁) နှစ်မြောက် ကချင်ပြည်နယ်နေ့ (Kachin Mungdaw Nhtoi) အခမ်းအနားကို Jhinghpaw Mungdaw Nhtio အမည်ဖြင့် ပြောင်းလဲကျင်းပရန် သတ်မှတ်လိုက်ကြောင်းသိရသည်။ ဇန်နဝါရီ ၁ဝ ရက်တွင် ကျ ရောက်မည့် (၇၁) နှစ်မြောက် ကချင်ပြည်နယ်နေ့ကို ကချင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့မှ ကြီးမှူး၍ ကချင်လူ မျိုးများနှင့် ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုဗဟို ကော်မတီတို့ ပူးပေါင်းကျင်းပသွား မည်ဖြစ်ပြီး Kachin Mungdaw Nhtoi ဟု သတ်မှတ်ကျင်းပရန်စီစဉ် ခဲ့သော်လည်း ယခင်သတ်မှတ်ကျင်း ပခဲ့သည့် Jhinghpaw Mungdaw Nhtoi ဟုသာ ယခုပြန်လည်ပြောင်း လဲ သတ်မှတ်လိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
”ဒီကိစ္စမှာ အရင်တုန်းကအ စဉ်အလာက ကချင်ပြည်နယ်နေ့ စပေါ်လာကတည်းက Jhinghpaw Mungdaw Nhtion လို့ သုံးနှုန်း လာတာကို ဒီနှစ်ကျမှ Kachin Mungdaw Nhtion လို့ သုံးနှုန်း လာတာကို တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေက သ ဘောမတူတာတွေ ရှိတယ်။ ဒါ့ ကြောင့် ရိုးရာဗဟိုက သုံးယောက် ပွဲဖြစ်ရေးကော်မတီက သုံးယောက် နဲ့ ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့တွေ့ပြီး ဇန်နဝါရီ ၇ ရက်က ပြောင်းလိုက်ရခြင်းဖြစ် တယ်”ဟု ပွဲဖြစ်မြောက်ရေးကော် မတီဥက္ကဋ္ဌဦးကင်ရောတန်ဂွန်းက ပြောသည်။ ယခုကဲ့သို့ ပွဲတော်အခေါ်အ ဝေါ်ပြောင်းလဲလိုက်ရခြင်း ပတ် သက်၍ ယခုပွဲတော်ကျင်းပပြီးစီးပါ က ကချင်ညီလာခံကျင်းပကာ ဆွေး နွေးသွားရန်ရှိကြောင်း သိရသည်။
ကချင်ပြည်နယ်နေ့ အခမ်း အနားမနောပွဲတော်ကြီးကို ဇန်န ဝါရီ ၁ဝ ရက်မှ ၁၂ ရက်အထိ သုံး ရက်တိုင်မြစ်ကြီးနားမြို့ရှိ မနောကွင်း၌ ကျင်းပသွားမည်ဖြစ်ပြီး ပွဲတော် ကြီးတွင် ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုကိုပြသည့်အနေဖြင့် မနောအကများ၊ အားကစားပွဲများ၊ ဖျော်ဖြေရေးအစီအ စဉ်များ၊ မနောမယ်ရွေးချယ်ခြင်းနှင့် ကာယအလှမယ်အလှမောင် ရွေးချယ်ပွဲစသည့် အစီအစဉ်များ ဖြင့် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပသွားမည် ဖြစ်သည်။ ယခုပွဲတော်ကြီးကို NLD အ စိုးရသစ်လက်ထက်တွင် ပထမဆုံးအကြိမ်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ပြီး ပထမ ဆုံးအကြိမ် ကချင်ပြည်နယ်နေ့ မ နောပွဲတော်ကြီးကို ၁၉၅၅ ခုနှစ်တွင် မြစ်ကြီးနားမြို့ စီတာပူရပ်ကွက်၌ ကျင်းပခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
TNLA နှင့် MNDAA တို့ ဖမ်းဆီးသွားသည့် ဒေသခံများ ပြန်လွတ်ရေး စစ်ရေးအပြင် အခြားနည်းလမ်းများဖြင့်ပါ
ညအချိန် ဆိုင်ကယ်ကို တိမ်းရှောင်ရင်း ယာဉ်တစ်စီး လမ်းဘေးလျှိုအတွင်း ထိုးကျ
စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီးရှိ တောင်သူများအား ဆောင်းသီးနှံချေးငွေ ကျပ် ဘီလီယံ ၆ဝ ကျော် ထုတ်ချေ?